﻿ ‘नेताज्यू, महिलालाई आरक्षण होइन, विश्वास भए अवसर दिनुस्’
बुधबार १५, साउन २०७६
महिलाहरु अटाउन सकिएन वा अटाउन आवश्यक ठानिएन, त्यसको लेखाजोखा पार्टी नेत्तृत्वले नै गर्ला वा किन महिला नेतृहरु अध्यक्ष वा सचिब हुन सकेनन् यस विषयमा पार्टी नेतृत्वको तर्क आफ्नै होला । तर परिणाममा जे देखियो, त्यसको अर्को परिणाम हाम्रो राजनीतिले भोग्नेछ । भावि दिनमा राजनीतिको केन्द्रमा सक्षम महिला नेतृको खडेरी आजैदेखि देखिएको छ ।
यति ठुलो भूगोलमा एकैजना पनि महिला नेतृत्वमा आउन नसक्नुले महिलाको क्षमता माथि पनि प्रश्न तेर्साएको छ । जुन गलत हो, तर नेकपाको अहिलेको नियतले त्यस्तै देखाएको छ ।
त्यसो त महिलाहरुलाई जिम्मेवारीविहीन पार्ने सवालमा अरु पार्टीहरु पनि कम छैनन् । केन्द्रीय नेतृत्व तह होस् वा स्थानीय समितिहरुको नेतृत्व तहमा महिलाहरुलाई कम प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै पार्टीले महिलालाई उपमेयरमा मात्रै सिमित गर्नुले पनि महिलाहरुप्रति आम मानिसको दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
महिलालाई योग्य सम्झेर हैन की, आरक्षणको नाममा मात्रै सिमित गरिनुले पनि लैगिंक रुपमा महिला अझैपनि पिछडिएका छन् भन्ने भान हुन्छ । पार्टी मात्र नभई विभिन्न संघ संस्थाको नेत्तृत्व पाउनबाटसमेत वन्चित छन् ।
के महिलाहरु नेतृत्व गर्न सक्षम नै छैनन् त ? तपाईको संघ संस्था वा राजनीतिक दललाई उचाईमा पु¥याउन महिलाहरुले के कम योगदान गरेका छन् ? एउटा पार्टी विशेषमा मात्र नभई समग्र क्षेत्रमा आखिर महिलाहरु पुरुषलाई शिखरमा पु¥याउने भ¥याङका रुपमा मात्रै प्रयोग त भईरहेका छैनन् ?
अब जवाफ चाहिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने विभिन्न देशमा महिला नेतृत्वलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइन्छ । क्षमतासँगै सहभागिता पनि हेरिन्छ । महिलामा रहेको इमान्दारिता र काम गराइमा गाम्भिर्यता पनि हेरिन्छ । तर नेपालमा भने त्यो देखिँदैन ।
आखिरमा राजनीतिक दलको नेत्तृत्व गर्नेदेखि राष्ट्र हाक्नेसम्मको काममा महिला सक्षम छन् । ती सबै आफ्ना क्षमता, कार्यकुशलता, र मेहेनतले नेतृत्वमा पुगेका हुन् । विडम्बना हाम्रो देशमा महिलालाई आजपनि घरभित्रै सिमित राखिन्छ ।
नेतृत्वमा आउन महिलालाई सहजता पक्कै छैन, जति एउटा पुरुषलाई हुन्छ । हुन त कतिपय अवस्थामा आरक्षणका कुरा नआएका हैनन् । यद्यपी सबै ठाउँमा महिलाको सहभागिता कोटामा मात्र सिमित नरहन सक्छ । त्यसैले महिलाले आफ्नो क्षमता, योग्यता हुँदा हुँदैपनि नेतृत्व तहमा आउन ठुुुलै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महिलाहरु घरपरिवार सम्हालेर, चुलोचौका भ्याएर मात्रै आफ्नो पेशा, व्यवसाय वा सांगठानिक काममा निस्किएकी हुन्छिन् । परिवारका हरेक सदस्यका मनोभावलाई बुझेर हरेकलाई चित्त बुझाएर आफ्नो सांगठानिक जिम्मेवारी पुरा गर्नु कम चुनौतीपूर्ण हैन । उनीहरुको यही बाध्यता नै खुबी हो । कि उनीहरु हरेक जिम्मेवारीलाई जुनसुकै हालतमा पुरा गर्छन् । पार्टीको काम पर्यो भन्दैमा घरपरिवार नै लथालिंग छाड्दैनन् । वास्तवमा महिलाहरु कुशल नेतृत्वकर्ता र व्यवस्थापक हुन् ।
यदि महिलामा योग्यता, कार्यकुशता र नेतृत्व गर्ने क्षमता छ भने अवसर दिनबाट किन बञ्चित गराउने ? कि त महिलामा कुनै क्षमता नै छैन भन्न सक्नुपर्यो । नत्र हिजोका दिनमा महिलाले यदि तपाइको संस्था, समुह र संगठनको लागि कुनै योगदान दिएको भए अब उनीहरुलाई अवसर दिन हिच्किचाउनु हुँदैन ।
त्यसैले अब एउटा राजनीतिक दलले मात्र हैन, हरेक क्षेत्रले महिलालाई जिम्मेवारी आरक्षणका नाममा हैन, उनको योगदान, योग्यता, इमान्दारिता र खुबी हेरेर दिने गरौँ । महिला भएकै कारण हेय भावनाले हेरेर अवसरबाट बञ्चित नगरौँ ।